Hay’ada SSF oo Qardho tababar ugu qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Hay’ada SSF oo Qardho tababar ugu qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada.
Hay’ada SSF oo Qardho tababar ugu qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada.
Tababrkaan oo socday laba maalmood 14-15 bisha ayaa diirada lagu saarayay sidii loo yarayn lahaa tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo xoojinta dimuqraadiyada ayaa waxaa ka faaidaystay in ka badan 5o qof oo ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada, Hay’ada SSF oo gacan ka helaysa hay’ada SYD Forum ayaa tababarada noocan oo kale ah mudooyinkii ugu danbaysay ka fulinaysay gudaha deegaanada Puntland.
Axmed Xasan Cartan
Axmed Xasan Cartan Madaxa hay’ada SSF oo ugu horayn goobta ka hadlay waxa uu sheegay in mashruucaan uu yahay mid balaaran oo loogu talagalay in la horumariyo fahanka bulshadu ka haysato dimuqraadiyada, sidoo kale waxa uu xusay ahmiyada barnaamijyadaan laga leeyahay in ay tahay sidii xaquuqda biniaadamka loo ilaalin lahaa, ahmiyad gaarana ay siiyaan.
Cabaas Askar oo ka socday xafiiska xuquul insaanka, madaxda ururada haweenka , dhalinyarada , Xildhibaan Xasan Ciise oo ka tirsan golaha deegaanka Qardho iyo xubno matalayay nabadoonada oo goobta ka hadlay waxay dhamaan qireen in barnaamijyadaaan ay muhiimad gaara u leeyihiin bulshada, kor u qaadadi wacyigelinta bulshada ay tahay lagama maarmaan , ugu danbayna hay’ada SSF iyo bahwadaagteeda shaqo ayay ka codsadeen in ay joogteeyaan.
Cabdilaahi Maxamed Barre Caato
Cabdilaahi Maxamed Barre Caato gudoomiyaha Gobolka Karkaar oo ugu danbayn goobta ka hadlay waxa ka sheekeeyey xiriirka ka dhaxeeya ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo sida diinta islaamka u dhawrtay, waxa uu xusay in ku dhaqan diinta ay tahay wadada lagu guuleysan karo aduun iyo aakhiroba.
Gabagabadii kasoo qaybgalayaasha tababarka ayaa loo qaybiyay kooxo kala duwan iyaga oo ka dooday arimaha la xiriira horumarin ilaalinta xuquuqda aadanaha, sida loogu hortagi karo tacadiyada ka dhanka ah xuquuuqda aadanaha iyo xoojinta nidaamka dimuqraadiyada oo ahaa mawduuc ay aad kasoo qayb galayaashu u lafa gureen.